प्रधानमन्त्री नै हतास बनेपछि जनताको आशा के होला ? – Nepal Journal
प्रधानमन्त्री नै हतास बनेपछि जनताको आशा के होला ?
Posted By: Nepal Journal September 16, 2018 | ३१ भाद्र २०७५, आईतवार १४:२८
समाचार टीप्पणी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार पार्टी कार्यालय धुम्वाराहीमा आयोजित नेता पोष्टबहादुर बोगटीको स्मृति सभामा सरकार र पार्टी बिरूद्ध आइलाग्नेहरूलाई अरिङ्गाल बनेर जाइलाग्न निर्देशन दिएको खबर आज सामाजिक सन्जालमा हिट छ ।
यति कठोर नबोलेपनि यसअघि बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रन पार्टी निकट बुद्धिजीबिहरूलाई आग्रह गरेका थिए । यसबाट के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री ओली रक्षात्मक बन्न चाहन्छन र उनलाई कार्यकर्ताले सहयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त मान्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली दुई तिहाइका प्रधानमन्त्री हुन । नेपाल जस्तो स्वार्थसमूहको राजनीति धेरै हुने ठाँउमा दुई तिहाईको सरकार गठन हुनु चानचुने कुरा होइन । धेरै लामो राजनीतिक संक्रमणकालबाट गुज्रिएर आएको नेपालमा स्थीर सरकार आउनु सारा नेपालीको लागि सुखद कुरा थियो ।
ओली आफै नेपालीलाई सम्बृद्ध पार्न कस्सिएर लागेका नेता हुन । निरासा नै निरासा भएको बेला सम्वृद्धि र आशाको सपना देखाउने राजनेताको रूपमा उनका समर्थकले उनलाई बिभूषित गर्ने गर्छन ।
बिगत नाकावन्दीको समयमा ओलीले देखाएको राष्टवादी धार र त्यही धारमा उभिएर बुनिएका सपनाकै कारण तत्कालीन एमालेले जनताको मन जितेको जग जाहेर नै छ । झन माओवादीसँगको एकीकरण पछि बनेको नेकपाको सरकारप्रमुखको नाताले ओलीबाट जनताले अति नै आस राख्नु अन्यथा पनि होइन ।
समाजवादी फोरम सरकारमा गएपछि बनेको दुई तिहाइको सरकारका लागि त काम गर्छु भन्दा केही अवरोध नै नहनु पर्ने हो । तर, अहिले सामाजिक सन्जालमा आएका तर्क चाँही संस्थापन जस्तो लाग्नु र सरकारी प्रतिरक्षा चाँही बिपक्षीजस्तो लाग्नु अचम्म लाग्ने सत्य बनेको छ । यसबाट सरकार अलमललिएको दृष्टिगोचर हुन्छ ।
एकजना अवोध बालिका निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको बिरोधमा सारा नेपालीले बिरोध गरे भन्दैमा निर्मलाले न्याय पाउन भन्ने अभियानमा लागेका सबैलाई सरकार बिरोधी देख्नु कायरता हो । यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका अभिव्यक्ति हतासका बोली हुन ।
प्रधानमन्त्रीले यसरी बोल्ने भन्दा घटनाको प्रमाण नष्ट गर्ने सबै प्रहरी अधिकारीलाई घटना भएको हप्तादिन भित्रै बर्खास्त गरेको भए त्यहाँ देखिन्थ्यो दुई तिहाई शक्ति । प्रधानमन्त्रीको महानता नाकावन्दी गरिएको उनको देवत्वकरण भन्दा माथि हुने थियो ।
स्थानीयस्तरमा प्रहरी र राजनीति दलले आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउन खोज्दा खोज्दै बिग्रिएको यो घटनाले सरकारलाई लज्जित बनाएको छ । यसअघि मेडिकल माफियाको चंगूलबाट निकै ढिला मुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले डा केसीको अनसनको समयमा पनि साख चुकाउनु परेको थियो ।
यी दुवै घटनालाई प्रधानमन्त्री ओली सरकार गिराउने डिजाइनको रूपमा व्याख्या गर्ने गर्छन् । तर यी दुबै घटना यथार्थ धरातलबाट आएका हुन । हुनसक्छ, यी दुबै घटनामा काँग्रेस र केही सरकारबिरोधी नागरिकहरू समावेश थिए तर यिनीहरू समावेश थिए भन्दैमा यी दुबै घटनामा जनताको समर्थन थिएन भन्न सकिन्न । काँग्रेस र ती नागरिक समाजले जति सुकै बिरोध गरेपनि चिनसँगको पारवहन सम्झौताको लागि जनताले ओलीको जयजकार गर्छन ।
माथिका बिषय सरकारले समयमै ट्याकल गर्न नजानेर बिग्रिएका समस्यामात्र हुन , सरकार असफल पार्न वा गिराउन चालिएका कदम होइन । किनभने डा केसीको भाग पूरा गर्दा प्रधानमन्त्रीको सम्मान बढेको छ भने निर्मला पन्तको हत्यारालाई कठघरामा मात्र ल्याउन उनकै कद बढ्ने छ । सडकमा नारा लाउनेले त के नै पाँउछन् र ?
बरू, प्रधानमन्त्री ओली एकीकृत पार्टीको आन्तरिक जोडघटाउले हतास बनेका हुन भने त्यो चाँही स्वभाविक मान्नु पर्छ । आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड बिना कुनै एजेण्डा बेमौसमी तरीकाले भारत र लगत्तै चीन जानु पछाडिका कारणबाट चाँही प्रधानमन्त्री हतास हुनु स्वभाविक छ ।
भारतमा दाहालले पाएको सम्मान प्रधानमन्त्रीसरह हुनुले नेकपा पार्टी पंक्तिमा प्रश्न उब्जनु सामान्य नै हो । पार्टी एकीकरणको समयमा गरिएको तर प्रकाशमा नल्याइएको सहमतिको दवावकै लागि प्रचण्डले छिमेकबाट प्रभाव देखाउन खोजेका हुन भने यस घटनाले एकीकृत पार्टीको भविस्यमा प्रश्न उठाउने छ ।
पार्टी एकता ताका गरिएको लिखित सहमति अनुसार अवको दुई बर्ष छ महिनामा ओलीले प्रधानमन्त्री पद दाहाललाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । बुझाउँदैनन कि भन्ने डर प्रचण्डमा देखिन्छ । किनभने प्रचण्ड ओली सम्बन्ध बिगतमा त्यति सुरूचिपूर्ण थिएन ।
यदि भारतले प्रचण्डमार्फत नेकपामा राजनीति गर्न चाहेको भए पार्टी एकीकरणका बेला जनमानसमा देखिएको आशंका सही देखिने छ, त्यो भनेको गिर्दो साखको माओवादीलाई एमालेमा एकीकरण गराएर एमालेको संगठन, संरचना र राष्टवादी धारलाई तहसनहस पार्ने छ ।
नेपालमा एमालेलाई कमजोर नपारी उ आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न सक्दैन । यसका लागि राम्रो अवसर भनेकै माओवादीसँगको एकीकरण नै हो । त्यसैपनि शसस्त्र द्धन्द्धकालमा भारतले माओवादीलाई सहयोग गरेकै पनि हो ।
माथि उल्लेख गरिएका मध्ये प्रधानमन्त्रीलाई हतास बनाउने कुनै कारण छ भने सबैभन्दा अन्तिममा उल्लेख गरिएको कारण नै हो । यदि त्यसो हो भने मुलुकमा दुई तिहाइकै सरकार बनेपनि केही हुने छैन । मुलुक सधै अस्थीरताकै सिकार हुने छ ।
प्रधानमन्त्रीले चिन्ता लिनु पर्ने भनेको त्यता हो । निर्मला प्रकरण, डा केसीको सत्याग्रहमा धेरै मानिस सडकमा आएर बिचलित हुनै पर्दैन । ती जति धेरै भएपनि सरकार गिराउन सक्दैनन् बरू उनीहरूको कुरा सुन्दा सरकारकै गरिमा बढ्छ ।
बरू सबै तिरका बिचौलिया सखाप पार्नुहोस्, सिण्डीकेट हटाउनु होस, ट्रेडयूनियनहरू खारेज गर्नुहोस्, पार्टीमा गुटको अन्त्य गर्नुहोस्, कम बोल्नुहोस्, पदको सम्मान गर्दै बिनम्र हुनुहोस्, सबैलाई न्याय हुने गरि जिम्मेवारी दिनुहोस् प्रधानमन्त्री हतास बन्ने पर्दैन । जनता नारा लगाउँदै तपाई समर्थनमा आउने छन् ।
Be the first to comment on "प्रधानमन्त्री नै हतास बनेपछि जनताको आशा के होला ?"